CDC: Nkọwa nke 'ịgba ọgwụ mgbochi nke ọma' nwere ike ịchọ mmelite
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » CDC: Nkọwa nke 'ịgba ọgwụ mgbochi nke ọma' nwere ike ịchọ mmelite
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Onye isi ụlọ ọrụ US Center for Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky
Walensky gbara ndị America niile tozuru oke ume ka ha nweta agbam ume ha, n'agbanyeghị mmetụta ọ ga-enwe n'ọdịnihu na ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ha.
A na-ahụta ndị bi na US ka ha gbara ọgwụ mgbochi zuru oke ma ọ bụrụ na ha nwere ọgwụ mgbochi abụọ nke Pfizer ma ọ bụ Moderna, ma ọ bụ otu ogbugba achọrọ maka Johnson & Johnson jab.
Ọ bụrụ na ndị na-ebuli elu ghọrọ akụkụ nke ihe achọrọ ka ewere ya dị ka 'gbara ya ọgwụ zuru oke', ọtụtụ ndị natara ọgwụ ha n'oge ga-adị mkpa ịnweta ihe nkwalite.
Ndị na-akwalite ọgwụ mgbochi ọ bụla dị na US anatala nkwado site na CDC na nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ, mana ọ bụ naanị maka ndị otu tozuru oke.
A na-ahụta ndị America ka ha gbara ọgwụ mgbochi zuru oke ma ọ bụrụ na ha nwere ọgwụ mgbochi abụọ nke Pfizer ma ọ bụ Moderna, ma ọ bụ otu ogbugba achọrọ maka Johnson & Johnson jab.
Nke a nwere ike ịgbanwe n'oge adịghị anya.
Dị ka Director nke US Ụlọ Ọrụ nke Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC), Rochelle Walensky, ekwuola na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike na-agbanwe nkọwa nke ịbụ "ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke" megide COVID-19, akwadoro ma dị maka agbam ume.
A jụrụ Walensky na ogbako ndị nta akụkọ nke taa, ma ndị tozuru maka ịgba bọọlụ ga-enwetakwu doses iji dobe ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke.
Walensky kwuru, sị: "Anyị agbanwebeghị nkọwa nke 'gbara ọgwụ mgbochi zuru oke', na-agbakwunye na ka ọ dị ugbu a ọ bụghị ndị America niile tozuru oke maka ịgba mbọ.
"Anyị nwere ike imelite nkọwa anyị maka 'ọgwụ mgbochi zuru oke' n'ọdịnihu," CDC Director kwuru.
Ọ bụrụ na ndị na-ebuli elu ghọrọ akụkụ nke ihe achọrọ ka ewere ya dị ka 'gbara ya ọgwụ zuru oke', ọtụtụ ndị America natara égbè ha n'oge ga-adị mkpa ịnweta ihe nkwalite iji nọgide na-enwe 'ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi' ha.
Ọgbara agbam ume maka ọgwụ mgbochi ọ bụla dị na US anatala nkwado site na ya CDC na Nri na ọgwụgwọ ọgwụ (FDA), mana naanị maka otu tozuru oke.
CDC akwadola usoro nkwado nkwado maka ndị okenye niile natara ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson, yana ndị agadi na ndị okenye na-enweghị mgbochi maka ọgwụ mgbochi Moderna na Pfizer.
Walensky na CDC kwuputara n'izu a ndị mmadụ nwekwara ike ịgwakọta ma gbakọọ gbaa agbam ume n'enweghị nsogbu. Ụlọ ọrụ ahụ kwupụtakwara taa na ntozu maka ihe nkwalite ga-agbasa n'ime ọnwa ndị na-abịa.
Walensky gbara onye ọ bụla tozuru oke ume ka ọ nweta agbam ume ha, n'agbanyeghị mmetụta ọ ga-enwe n'ọdịnihu na ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ha.
"Ha niile na-arụ ọrụ nke ọma n'ibelata ihe ize ndụ nke ọrịa siri ike, ụlọ ọgwụ, na ọnwụ, ọbụlagodi n'etiti ụdị Delta dị iche iche na-ekesa," Onye isi CDC kwuru.
Dabere na data CDC ọhụrụ, ihe karịrị 66% nke ndị US anatala opekata mpe otu ọgwụ mgbochi COVID-19.
Ndụmọdụ kacha mma iji hụ na njem dị mma yana obi ụtọ
Ọrịa COVID-19 Omicron ọhụrụ dị na UK, Belgium…